We She Me: သမီးလေးရဲ့ တိုးတက်မှု
သမီးလေး မြင့်မြတ်နိုးဟာ အခုဆို ၂ လ ပြည့်တော့ပါမယ်။ သမီးလေးရဲ့ သိသိသာသာ ပုံမှန် တိုးတက်မှုဟာ မိဘတွေကို ပီတိ ဖြစ်စေပါတယ်၊ စိုးရိမ်မှု လျော့စေ၊ကင်းစေပါတယ်။
သမီးတုန် (ကျွန်တော်က တုန်နေအောင် ချစ်လို့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် သမီးတုန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခေါ်ရတာလည်း အားရတယ်လေ။) ဟာ ၁၀ ရက်သား ကတည်းက အနှီးပတ်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူး။ သူ့ကို အနှီးနဲ့ ထုပ်ထားရင် မကြိုက်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လက်နှစ်ဖက်ကို အပြင် ထုတ်ထားပေးရပါတယ်။ သူလှုပ်ချင်သလို လှုပ်လို့ ရအောင်ပါ။ အဲဒီတုန်းက လက်တွေကို လိုရာရောက်အောင် မလှုပ်တတ်သေးပါဘူး။ အခုတော့ ခေါင်းယားရင် ခေါင်း၊ နှာခေါင်းယားရင် နှာခေါင်း ရောက်အောင် လှုပ်တတ်နေပါပြီ။ သိပ်ကြီးတော့ တိတိကျကျ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နို့စို့တဲ့အခါမှာလည်း မစို့ချင်တော့ရင် နို့ဗူးကို တွန်းထုတ်ပါတယ်။
သမီးဟာ မတူတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသံတွေကို ကွဲကွဲပြားပြား ထွက်တတ်နေပါပြီ။ သူ့ဟာသူ ဆော့နေရင် အသံ တစ်မျိုး ထွက်ပါတယ်။ အသံ တိုတိုလေးတွေကို တိုးတိုး ထွက်တာပါ။ `အဲ့..အဲ့´ နဲ့ပါ။ သူနဲ့ စကား သွားပြောရင် အသံ ရှည်ရှည်ကို တိုးတိုး ထွက်တာပါ။ ``အယ်.....´´နဲ့။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ပြုံးပြီး ပြန်ပြောပါတယ်။ သူ့အမေအသံ ကြားလို့ နို့ စို့ချင်တဲ့အခါ၊ သူအနားကို သွားလို့ သူ့ကို ချီစေချင်တဲ့ အခါ အသံပြတ်ပြတ်ကို နည်းနည်းကျယ်ကျယ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ခြားပြီး ထွက်တာပါ။ `အက်..............အက်´(အက်နဲ့ငှက်ကြားက အသံ) နဲ့ပါ။ အဲဒါကို ကောက်မချီဘဲနဲ့ သူလုပ်သလို `ငှက်......ငှက်´ နဲ့ သူ့ကိုစတဲ့အခါ `အက်´၊`အက်´ကိုပဲ ပိုကျယ်ကျယ် ခပ်စိတ်စိတ် ခြေတွေ၊ လက်တွေကိုပါ လှုပ်ပြီး အော်တော့တာပါ။ ပြီးတော့ သမီးက တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ လုပ်ငိုတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့နားရောက်နေပြီး သူ့ကို အရေးတယူ မလုပ်တဲ့ အခါ၊ သူ့အမေကို မြင်နေရပြီး နို့မစိုရရတဲ့ အခါမျိုးမှာပါ။ မျက်စိကို အကုန် မပိတ်ဘဲ ပါးစပ်လေးကို မဲ့ပြီး `အဲ......´ဆိုပြီး တစ်ချက်ငိုပါတယ်။ ပြီးရင် လူကို အကဲခက်ပါတယ်။ မရရင်တော့ `အက်...အက်´ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးတော့တာပါပဲ။ သမီးက ငိုတဲ့ အခါမှာလည်း မတူပါဘူး။ ရိုးရိုးငိုတဲ့အခါ `အ..ငဲ.......အ..ငဲ´ဆိုပြီး ပီပီသသ ပုံမှန် ငိုပါတယ်။ ဗိုက်တွေ ဘာတွေ နာလို့ငိုရင်တော့ အသည်းအသန် အထိန်းအကွပ်မရှိ ငိုတော့တာပါပဲ။ မျက်နာတွေလည်း နီမြန်းလို့။
သမီးဟာ ငယ်ငယ် (၂ ပတ်-၃ ပတ်လောက်) ကတည်းက အသံတွေကို နားထောင်နေတတ်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်နောက်မှာ သစ်ပင်တွေ အုပ်အုပ် ရှိပြီး ငှက်ကလေးတွေ နေလို့ ငှက်သံတွေ ကြားရပါတယ်။ သမီးလေးက ငှက်သံကြားရင် အပြင်က သစ်ပင်ကို လှမ်းကြည့်တတ်ပါတယ်။ အိပ်ခန်းထဲက နေပြီး အပြင်က စကားပြောသံကို နားစွင့်ပါတယ်။ နို့စိုနေတုန်းဆိုရင် စို့တာကို ရပ်ပြီး နားစွင့် စဉ်းစားနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူလဲလို့ စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် ချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်တော့ လန့်တတ်ပါတယ်။
သမီးလေးဟာ လူမျက်နာတွေကို မှတ်မိနေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် သူ့အမေ မျက်နာကိုပါ။ ဒါတောင် သူ့အမေ မျက်မှန် မတတ်ထားရင် တစ်မျိုး တတ်ထားရင် တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူ့အမေ ရင်ခွင်ကိုတော့ ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါတယ်။ အနံ့နဲ့ မှတ်ထားပါ။ သူ့အမေ ရင်ခွင်ထဲကျမှ နို့စို့ဖို့ တောင်းပါတယ်။ လူစိမ်းဆိုရင်လည်း သိပါတယ်။ သေသေချာချာကြည့်ပြီး လိုက်မှတ်ပါတော့တယ်။ သူမှတ်မိဖို့ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်လောက် ကြာတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ပတ်လောက် ကြာတဲ့ ခရီးက ပြန်လာတော့ သမီးလေးက ၆ ပတ်ပါ။ ပြန်ရောက်တော့ သမီးက ခေါင်းကို ဟိုဘက်၊ ဒီဘက် လှည့်တတ်နေပါပြီ။ အိပ်နေတုန်း ဘယ်ဘက်ကို ခေါင်းချထားရာကနေ ဒီဘက်က အသံကြားရင် ချာကနဲ ညာဘက်ကို လှည့်တတ်တာပါ။ ကုတင်ပေါ်မှာ သူ့ကို အလယ်မှာထား အိပ်ရင် ဟိုဘက်လှည့်ပြီး အမေကို ကြည့်လိုက်၊ ဒီဘက်လှည့်ပြီး အဖေကို ကြည့်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ။ သူ့ကို ကုတင်ပေါ်ချလိုက်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားရင်လည်း မျက်စိတစ်ဆုံး ခေါင်းကို လှည့်ပြီး လိုက်ကြည့်ပါတယ်။ ပုခုံးပေါ် တင်ထားပြီး ချီရင်လည်း ခေါင်းကို ထောင်ပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လုပ်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းကတော့ ကောင်းကောင်း မထောင်နိုင်သေးတော့ တုန်တုန် တုန်တုန် နဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သမီးက နို့တော့ သတ်မှတ်ထား သလောက် မစို့သေးပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားသလောက်ဆိုတာ ပေါင်ချိန် ၄.၅ ကီလို(ဂရမ်) မှာ တစ်နေ့ကို ၇၂၀ မီလီလီတာ စို့ရမယ်ဆို သူက ၄၀၀-၄၅၀ ပဲ စို့ပါတယ်။ စိုးရိမ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တော့ ဆရာဝန်က နည်းတော့နည်းတယ်တဲ့ သူလည်းပဲ ၇၀၀ မီလီလောက် စို့သင့်တယ် ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတက်မှုကို ကြည့်ပြီးတော့ ပေါင်ချိန်ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲတဲ့။ သမီးလေးရဲ့ ပေါင်ချိန်ကတော့
မွေးစက ၃ ကီလို
၂ ပတ်မှာ ၃.၃၁ ကီလို
၃ ပတ်မှာ ၃.၈ ကီလို
၄ ပတ်ခွဲမှာ ၄.၁ ကီလို
၇ ပတ်မှာ ၄.၅၇ ကီလို ရှိပါတယ်။
ဒီက တရုပ်မတွေရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ နည်းနည်းသေးပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ပွပွ ကြီးကြီးပေါ့။ သမီးကတော့ ကျစ်ကျစ်ပေါ့။ (ကိုယ့်ကလေး ဆိုတော့လည်း။)
အင်း... ပြောရင် ယုံမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ အခု အရွယ်လေးနဲ့ သမီးလေးက ကျွန်တော်နဲ့ ဆော့တတ်နေပါပြီ။ ဘယ်လို ဆော့လည်းဆိုတော့ သူအိပ်(လှဲ) နေတုန်း သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ် (ခြေဖ၀ါးနဲ့ ခြေသလုံးကြား)မှာ ခွလုံးကို တင်လိုက်ရင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မပြီးတော့ ခွလုံးကို အောက်ကျအောင် ကန်တတ်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီး ကန်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတွက် တော်တော် အားထုတ်ပြီး လုပ်ရတာပါ။ မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး ခြေချောင်းလေးတွေကို မ ရတာပါ။ အောက်ကျအောင် ကန်နိုင်ရင် တစ်ခါတစ်လေ ရယ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ သူလုပ်လိုက်နိုင်လို့ ပျော်တယ်ဆိုတာကို သူ့မျက်လုံးမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကိုမှ ကျွန်တော်က ခွလုံးကို ဗိုက်ပေါ်တင်ရင် သူ့အတွက် တော်တော် ခက်သွားပါတယ်။ မရရအောင် လုပ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါကျရင် အပေါ်တက်သွားပြီး မျက်နာပေါ် တင်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် လက်နဲ့ ဖယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နာနဲ့ ခွလုံးကြား လက်မထည့်တတ်တော့ ဖယ်ရခက်ပါတယ်။ မဖယ်နိုင်တာ နည်းနည်း ကြာသွားရင် လန့်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူက ဒီလို ဆော့တာကို သဘောကျပါတယ်။
ဒါတွေဟာ စာရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ မှတ်မိသလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ တိုးတက်မှုက သိပ်ကို မြန်ပြီး သိသာတဲ့ အတွက် ဒါလေးတွေကို စောင့်ကြည့်နေရတာကိုက အင်မတန် ကြည်နူးဖွယ် ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။
Physically တိုးတက်မှုကိုတော့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
imaginary clouds no2 - 5/24/07, 10:59 AM
Phyo Wai Kyaw - 5/24/07, 1:33 PM
mayvelous - 5/25/07, 7:52 AM
You are indeedagood father who keep tracking every detail about the child. She is very lucky to have you asaDad.
One thing though, it's not good to call those nick names in public ie. TaMeeTone etc.
I understand parents just love to give cute silly names to their kids but once they grow up and the name still growing with them, it is not really good for the kid. They might get teased from other kids.
We used to call my youngest sister as "PiSi" (PiSiKweLay) for she is so cute and like to squeeze her when she was young. But that name stays with her till now and not many people want to address her in proper name but that nick PiSi. So it's sometimes very annoying for her if someone call her like that in public among strangers. Kinda becomealaughing matter. So calling nicks among family members is absolutely fine but becareful of letting outsiders know about it.
Andy Myint - 5/25/07, 11:41 AM
Many Thanks for comment, poem & sound advice...
Anonymous - 8/3/08, 1:20 PM
ko andy gyi, when ur's daughter time u wrotealot of articles, but compare with son time very few. Please write more.
Andy Myint - 8/4/08, 9:41 PM
Dear Reader, thanks for reminding me.. I will write soon... :)